Sonos Inotangisa Nyowani App uye Software Gadziriso | IPhone nhau
Sonos inotangisa nyowani app uye software kugadzirisa
Tichitarisa kumberi kune inotevera inovhurwa iyo Sonos yakagadzirirwa katalog yayo, iyo North America femu yakaona zvakakodzera kuvaperekedza neyakavandudzwa sisitimu yekushandisa iyo inokanganisa kune zvishandiso zvinoenderana zvatakambotaura nezvazvo pakutanga, asi hazvingomiri ipapo. Iko kunyorera kwakagadzirwazve zvishoma, asi kwave kuwana mukushanda uye kunyanya mukuita.
Zvino uye kutarisira nhau, Sonos yakafunga kuvhura iyo nyowani application iyo inokutendera iwe kuvandudza zvishandiso zvako kune nyowani S2 inoshanda sisitimu uye zvakare kushandisa zvakazara kugona kwazvino kugona. Ngatitarisei izvo zvitsva kubva kuna Sonos.
Iwe unotoziva kuti muno muActualidad iPhone isu takaongorora zvakawanda zvezvigadzirwa zveSonos, unogona kushanyira yedu YouTube chiteshi kana chikamu chekuongorora kuti uzive kuti ndezvipi zvigadzirwa izvo zvigadzirwa zvinogadzirwa. Nekudaro, izvo zvinotisvitsa pano nhasi ndizvo chaizvo izvo software, iri pasina mubvunzo imwe yeakanyanya kukosha akawedzerwa maitiro eSonos. Mune ino kesi, iyo nyowani yekushandisa system inowanikwa zvizere, asi kune izvi iwe uchafanirwa kurodha iyo nyowani Sonos application. Kune iro chikamu, iro rekare application rinozotumidzwazve zita rekuti Sonos S1 uye richachengetedza chinyakare icon, nepo iyo nyowani ichitora imwe nhanho yemamwe anoshamisa mavara.
Kugadziriswazve kwave kwakareruka, kunyanya maererano nemavara uye zvidiki zvidiki, asi izvo isu zvatakawana yakawanda shanduko iri chaizvo maererano nehunyoro, iko kushanda kwekare kwanga kwakanaka, asi iyi inoenda zvinoshamisa nekukurumidza. Kune rimwe divi, iko kunyorera kunovandudza masisitimu ese eSonos anoenderana neS2 (iyo iwe yaunogona chete kuisa neichi chishandiso chitsva), saka kana iwe uine chero vatauri veSonos vatakataura muchinyorwa chakapfuura, inguva yakanaka yekuvandudza iwo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Sonos inotangisa nyowani app uye software kugadzirisa
Apple inomira kusaina iOS 13.5 uye mukana wekudzikira kuti utore mukana weiyo jailbreak
Chii chinoitika kana ndikachinja router yangu kumba nemidziyo yeKeKKit?